Page2of 3	21. မှုခင်းတွေကို ဘယ်လိုနှိမ်နင်းကြမလဲ	(2016)
ရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ နေရာတော်တော်များများမှာ နေ့စဉ်ရက်ဆက် ကြားနေ၊ မြင်နေရတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ ဖြစ်ပွားနေရတာဟာ စီးပွားရေး မပြေလည်လို့လား၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး အားနည်းလို့လား၊ ဘယ်လို အကြောင်းတွေကြောင့်လဲ၊ ...	Created on 17 December 2016	22. ရန်ကုန်နဲ့ ကားတင်သွင်းခွင့်မူ	(2016)
စီးပွားရေးမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ရန်ကုန်မှာ ကားတင်သွင်းခွင့် မူဝါဒသစ်ကြောင့် တနိုင်ငံလုံးက ကားစျေးကွက်အပေါ် ရိုက်ခတ်မယ့် အလားအလာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ကားတင်သွင်းခွင့် မူဝါဒသစ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စီးပွားရေး လောကသားတွေရဲ့ ...	Created on 01 December 2016	23. အိန္ဒိယ နဲ့ စစ်တွေ	(2016)
ဒီဇင်ဘာ ၁၊ ၂၀၁၆ - ကြန့်ကြာနေတဲ့ ကုလားတန်ဘက်စုံ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စီမံကိန်းနဲ့ စစ်တွေ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို ဦးအောင်ခင် က လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ကိုကျော်ကျော်သိန်းနဲ့အတူ တင်ပြထားပါတယ်။FG_AUTHORS: ဗီအိုအေ... ဒီဇင်ဘာ ...	Created on 01 December 2016	24. စင်္ကာပူကို အနှစ် ၂ဝ အ တွင်း ကျော်တက်မယ် လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော	(2016)
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က စင်ကာပူ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ မနေ့ က တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ တွေ့ဆုံပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က"စင်ကာပူရဲ့ လွတ်လပ်ရေးခေတ်ဦးကာလမှာ အဲဒီအချိန်တုန်းက ...	Created on 01 December 2016	25. သီလဝါစီးပွားရေးဇုန် တိုးတက်မြင့်မားလာကြောင်း ဂျပန်ဥက္ကဌ ပြောကြား	(2016)
မြန်မာ သီလဝါစီးပွားရေးဇုန်ဟာ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးဒေသကြီးတခုဖြစ်လာနေပြီး နိုင်ငံခြားက လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ ငွေပမာဏဟာ ကန်ဒေါ်လာ သန်းတထောင်နီးပါးရောက်ရှိနေပြီလို့ Nikkei Asean Review နစ်ကိုင်းအေးရှင်းရီဗြူး ...	Created on 01 December 2016	26. Donald Trump စီးပွားရေးမလုပ်ဘဲ သမ္မတတာဝန် ထမ်းဆောင်မည်	(2016)
လာမယ့် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှာ စတင်ပြီး သမ္မတ တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါ အငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်လာမှာတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ သူ့ရဲ့ နိုင်ငံတကာမှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ စီးပွားရေးကဏ္ဍကို လုပ်ဆောင်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ သမ္မတတာဝန်ကိုသာ ...	Created on 01 December 2016	27. ဧက ၅ဝအထိ ပိုင်ဆိုင်တဲ့ တောင် သူတစ်ဦးကို ကျပ်သန်း ၅၀ အထိ ချေးငွေ ထုတ်ပေးမည်	(2016)
... လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနတွေ က ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အနေနဲ့ အဲဒီချေးငွေထဲကနေ တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့ လယ်ယာစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ...	Created on 30 November 2016	28. နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ပဉ္စမအကြိမ် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး အစိမ်းရောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတ	(2016)
Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး... Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး Read more http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/speeches-and-remarks/2016/11/30/id-11305 Created on 30 November 2016	29. ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရဖို့ စင်္ကာပူမှာ ဒေါ်စု ကြိုးစား	(2016)
“ကျမတို့ရဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေသစ်ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရ လွယ်ကူစေဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ချမှတ်ထားတဲ့ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအသစ်တွေဟာလည်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ စိတ်ချလက်ချလုပ်နို်င်ဖို့အတွက် ပိုပြီး လွယ်ကူစေပါလိမ့်မယ်။"FG_AUTHORS: ...	Created on 30 November 2016	30. နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော် ပဉ္စမအကြိမ် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး အစိမ်းရောင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတ	(2016)
Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး... Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး Read more http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/news/2016/11/30/id-11302 Created on 29 November 2016	31. အနာဂတ် ကျုးဘား စီးပွားရေးနဲ့ နိုင်ငံတကာစျေးကွက်	(2016)
Fidel Castro ကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက် ကျူးဘားရဲ့ စီးပွားရေးအနာဂတ်နဲ့ ကမ္ဘာတဝှမ်းနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေအပေါ် မေးခွန်းထုတ်စရာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ ကျူးဘားအစိုးရအနေနဲ့ စျေးကွက်စီးပွားရေးမှာ ရှေ့တိုးမှုအသစ်တွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ...	Created on 29 November 2016	32. လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲခံရ မှု လေးနှစ်ပြည့် ဆန္ဒပြ	(2016)
... တောင်းဆိုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံရှေ့မှာ လက်ပံတောင်းတောင် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွား ကာကွယ်စောက်ရှောက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင် ၅ဝလောက်က လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ မီးလောင်ဗုံးတရားခံတွေကို ...	Created on 29 November 2016	33. ကာလုံအစည်းအဝေး ခေါ်ယူပေး ဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီ ၁၃ ပါတီ တောင်း ဆို	(2016)
... ရှိတယ်။ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ စစ်ရေးအခြေအနေဟာ အကျပ်အတည်းဖြစ်နေပြီ၊ နယ်ပယ်စုံမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အထွေထွေအကျပ်အတည်းဖြစ်တယ်၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကျတော့ ပုဒ်မ ၂ဝ၁ မှာ ကာကွယ်ရေးနဲ့ လုံခြုံရေးကောင်စီကို ...	Created on 29 November 2016	34. အနာဂတ်တွင် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍသည် နိုင်ငံ့စီးပွားရေးကို အဓိကမောင်းနှင်မည့် စီးပွားရေး အင်အားစုက	(2016)
Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး... Authors: နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး Read more http://www.president-office.gov.mm/?q=briefing-room/news/2016/11/29/id-11296 Created on 29 November 2016	35. NLD ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တချို့လွှတ်တော်ရေးရာကော် မတီတာဝန်တွေကနေ ဖယ်ရှားခံရ	(2016)
... ပြည်သူ့လွှတ်တော် စီးပွားရေးနဲ့ ဘဏ္ဍာရေး ဖွ့ံဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဝင်ဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာဒုံမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်လှိုင်ဝင်းက လွှတ်တော်မှာ သူဆွေးနွေးတဲ့ တချို့အကြောင်းအရာတွေကို ...	Created on 28 November 2016	36. တရုတ် နဲ့ ကျောက်ဖြူ	(2016)
နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၆ - ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်မှာ တရုတ်ကုမ္ပဏီ	အုပ်စုကို လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့ ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အနှစ် (၂၀) ကျော်ကြာမှ ပြီးစီးမယ့် စီမံကိန်းအကြောင်း ...	Created on 24 November 2016	37. Trump နဲ့ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးအယူအဆ	(2016)
လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေး (သို့) ကန့်သတ်ချက်တွေ သွင်းကုန်ခွန်တွေ သိပ်မကောက်တဲ့ နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေး အယူအဆဟာ Ttump အစိုးရသစ်လက်ထက်မှာ ဘေးဖယ်ခံရဖွယ်ရှိပါတယ်။ Trump မဲဆွယ်စဉ် ပြည်တွင်းစီးပွားကာကွယ်ရေးကို ဟောပြောလှုံ့ဆော်ခဲ့တာကြောင့်လို့ ...	Created on 22 November 2016	38. TPP သဘောတူညီချက် အိုဘားမား ကာကွယ်ပြောဆို	(2016)
အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု APEC အဖွဲ့ဝင် ၂၁ နိုင်ငံဟာ ဒီနှစ်အစောပိုင်းကရယူခဲ့တဲ့ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ ရပ်ဝန်းနိုင်ငံတွေကြား လွတ်လပ်စွာကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက် TPP နဲ့အညီ လိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့ ...	Created on 21 November 2016	39. ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ကာကွယ်မှု ဆန့်ကျင်ဖို့ APEC ခေါင်းဆောင်တွေ တိုက်တွန်း	(2016)
အာရှပစိဖိတ် နိုင်ငံပေါင်း ၂၁ နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေက ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများကို ပြည်ပယှဉ်ပြိုင်မှုမှ အကာကွယ်ပေးမှု မရှိစေဖို့နဲ့ TPP ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်ကို ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း ...	Created on 21 November 2016	40. စီးပွားရေးပွင့်လင်းမှု ကာကွယ်ဖို့ APEC ခေါင်းဆောင်တွေတိုက်တွန်း	(2016)
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်တွေကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေက မစွန့်လွှတ်ကြဖို့ ပီရူးနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ နိုင်ငံတကာ ထိပ်သီးညီလာခံတခုကို တက်ရောက်နေကြတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေက - တောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။FG_AUTHORS: ...	Created on 20 November 2016	StartPrev123NextEnd